Angela Merkel oo mar afaraad dooneyso xilka Madaxtinimada - BBC Somali
Angela Merkel oo mar afaraad dooneyso xilka Madaxtinimada
Image caption Hogaamiyaha dalka Garmalka Angela Merkel
Hogaamiyaha dalka Garmalka Angela Merkel ayaa saraakiil saresare oo ka tirsan xisbiga ay ka tirsantahay ee Conservative-ka u sheegtay in mar afaraad ay u tartami doonto xilka madaxtinimada dalka Germalka , Sida ay sheegtay wakaalada wararka ee TP. Mrs Merkel ayaa la filalayaa in ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo qorshahaasi.
Angela Merkel ayaa doorashada guud ee dalkaasi ka dhici doonta sanadka dambe waxaa la tartami doono gabadha hogaamiso xisbiga Alternive Fuer duestchland oo ah xisbi si aad ah uga soo horjeedo Musliminta .
Inkastoo aad loo dhaleceeyay siyaasada Angela Merkel ee ku aadan qaxootiga , haddana wali waxaa ay heysataa taageero ballaaran.
Waxaana doorashadan la filayaa in ay noqoto mid ka duwan kuwii hore , maadaama waddanka Jermalka iyo guud ahaan qaarada Yurub ay dhibaato ka heysato dadka soogalootiga.